खतरनाक हुन सक्छ शरीरमा क्याल्सियमको कमी : मानिस मर्न पनि सक्छ ! | Ratopati
खतरनाक हुन सक्छ शरीरमा क्याल्सियमको कमी : मानिस मर्न पनि सक्छ !
जब शरीरमा क्याल्सियमको कमी हुन्छ, शरीरको आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि हड्डी तथा दाँतमा भएको क्याल्सियम पनि प्रयोग हुन थाल्छ
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, हाम्रो शरीरको लागि नभई नहुने तत्वहरुमध्ये क्याल्सियम पनि एक हो । धेरैलाई के कुरा थाहा छ भने हड्डी र दाँतको स्वास्थ्यको लागि क्याल्सियम नभई नहुने खनिज तत्व हो । तर वास्तवमा क्याल्सियमको काम त्यति मात्रै होइन । क्याल्सियमले हड्डी र दाँत बलियो त बनाउँछ नै, त्यसभन्दा बाहेक क्लाल्सियमले मस्ष्तिकबाट प्राप्त हुने सन्देशहरुलाई शरीरका कोषहरुसम्म पुर्याउनको लागि पनि सन्देशवाहकको रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । त्यसबाहेक, शरीरमा हर्मोनहरुको निस्कासन, रगत जम्नु, मांसपेशीहरु खुम्चनु तथा आराम अवस्थामा ल्याउनको लागि भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ ।
कुनै पनि कारणले शरीरमा क्याल्सियमको कमी भयो भने त्यो अवस्था खतरनाक हुन सक्छ । शरीरमा क्याल्सियमको कमीले गर्दा हुने रोगलाई हाइपोक्याल्सेमिया (Hypocalcemia) भनिन्छ । सामान्यतः शरीरमा भिटामीन डी र म्याग्नेसियमको कमी हुँदा पनि शरीरले क्याल्सियम राम्ररी ग्रहण गर्न सक्दैन र यसको कमी हुन जान्छ । त्यसैगरी, नून धेरै खाँदा वा फस्फोरस बढी हुने चियो पेयहरु बढी मात्रामा खाँदा पनि यो समस्या देखापर्ने खतरा बढ्छ । त्यसबाहेक, मृगौलाको जटील रोगहरु, थाइराइडडले राम्ररी काम गर्न नसक्दा तथा विभिन्न खालका औषधीहरुको असरको कारण पनि शरीरमा क्याल्सियमको कमी हुन सक्छ ।
हाम्रो शरीरको रगतमा माथि लेखिएका वा अन्य कुनै पनि कारणले क्याल्सियमको मात्रा कम हुँदा हाइपोक्याल्सेमिया रोग लाग्छ । यो रोग लामो समयसम्म रहिरह्यो र उपचार गरिएन भने दाँतसम्बन्धी समस्याहरु, मोतियाबिन्दु, मस्तिष्कमा परिवर्तन र हड्डी मक्किने रोग लाग्न सक्छ ।
हाइपोक्याल्सेमियाको अवस्था प्राणघातक नै पनि हुन सक्छ । यसको बेलामा नै उपचार गरिएन भने रोगीको मृत्यु पनि हुन सक्छ ।
शरीरमा क्याल्सियमको कमी हुँदा प्रारम्भिक चरणमा त्यसको कुनै लक्षणहरु नदेखिन पनि सक्छ । तर क्याल्सियमको कमी हुँदा शरीरमा विभिन्न खालका समस्याहरु र लक्षणहरु देखापर्न सक्छ, जुन देखापर्यो भने समस्याको पहिचान गर्न अनि त्यसको उचित उपचार गर्नको लागि तुरुन्तै स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्छ ।
शरीरमा क्याल्सियमको कमी हुँदा निम्नानुसार लक्षणहरु देखापर्न सक्छ ।
शरीरमा क्याल्सियमको कमी हुँदा देखापर्ने प्रारम्भिक लक्षण भनेको मासुहरु दुख्ने, बाउँडिने र मासुहरु फरफराउने हुन्छ । हिँड्डुल गर्दा विशेष गरी तिघ्रा र पाखुराहरु दुख्ने हुन्छ ।
क्याल्सियमको कमी बढी नै हुँदै जाँदा हात, खुट्टा, पाखुरा र मुख वरिपरि झमझमाउने, बोधो हुने, फरफराउने जस्ता समस्याहरु पनि देखापर्न सक्छ ।
त्यसो त यस्तो समस्या आउने जाने हुन्छ । विशेष गरेर हामीले केही क्रियाकलापहरु गर्दा माथि उल्लिखित समस्याहरु हराएको भान हुन्छ र हामीले त्यति वास्ता गर्दैनौं । तर वास्तवमा चाहिँ ती लक्षणहरुले हाम्रो शरीरमा क्याल्सियमको कमी भएको कुराको संकेत गरिरहेको हुन सक्छ ।
चरम अनिद्रा र थकान
क्याल्सियमको अभाव हुँदा चरम अनिद्रा र थकानको समस्या हुन सक्छ । यो हुँदा अल्छी लाग्ने, सुस्तताको अनुभव हुने र शरीरमा तागत नै नभएको जस्तो हुन्छ । त्यसो त थकान अरु कारणले पनि हुन सक्छ । तर क्याल्सियमको कारण हुने थाकानमा चाहिँ टाउकोमा रित्तोपनाको आभाष, रिंगटा लाग्ने, एकाग्रता नहुने, भुल्ने र भ्रमित हुने जस्ता समस्याहरु देखापर्न सक्छ ।
नङ र छालाका समस्याहरु
अति धेरै क्याल्सियमको कमी हुँदा नंग र छालामा पनि असर गर्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा छाला अत्यन्तै चिलाउने गर्छ । कतिपय अनुसन्धानहरुले त के पनि देखाएको छ भने छालामा हुने जलनको एउटा कारण क्याल्सियमको कमी पनि हो । यस्तो अवस्थामा छाला चिलाउँछ, रातो हुन्छ र फोकाहरु देखापर्न थाल्छ ।
त्यसै गरी, क्याल्सियमको कमी हुँदा नंग फुस्रो र सुख्खा हुने, भाँच्चिने र कडा तर सजिलै टुट्ने खालको हुने हुन्छ । त्यसैगरी, टाउकोमा गोला धब्बा देखापरेर कपाल खस्ने पनि हुन सक्छ ।
हड्डी मक्किने समस्या
क्याल्सियमको कमीले हुने अर्को खतरनाक समस्या भनेको हड्डी मक्किने पनि हो ।
क्याल्सियमको कमीले हड्डीमा अस्टियोपेनिया (Osteopenia) नामक समस्या देखापर्छ । यो अवस्थामा हड्डीको खनिजतत्वहरुको घनत्वमा कमी आउँछ । यसले गर्दा हाम्रो हड्डी सजिलै खिइने र मक्किने (Osteoporosis) समस्या देखापर्न थाल्छ । यस अवस्थामा आइपुगेपछि हड्डी खिइएर पातलो हुने र सजिलै भाँच्चिने खतरा हुन्छ । यो समस्या देखापरेपछि पीडा हुने, बस्दा समस्या हुने र कालान्तरमा गएर अपांग नै पनि बनाइदिन सक्छ ।
त्यसो त हड्डीमा क्याल्सियम जम्मा भएको हुन्छ । तर हड्डी बलियो हुनको लागि त्यसको मात्रा धेरै हुनुपर्छ । जब सम्पूर्ण रुपमा क्याल्सियमको मात्रा कम हुन्छ, तब शरीरको अन्य भागमा चाहिने क्याल्सियमको आपूर्ति हड्डीबाट हुन थाल्छ । यो अवस्थामा हड्डीमा क्याल्सियमको मात्रा कम भई हड्डी कमजोर हुन थाल्छ र सजिलै भाँचिने खतरा हुन्छ ।
महिनावारीको बेला हुने पीडा
महिनावारी हुनेबेलामा कतिपय महिलाहरुलाई अत्यन्तै पीडा हुने गर्छ । कतिपय अध्ययनहरुले के देखाएको छ भने शरीरमा क्याल्सियमको मात्रा कम हुँदा पनि महिनावारीको बेला हुने त्यस्तो पीडा बढ्ने गर्छ ।
सन् २०१९ मा गरिएको अर्को एक अध्ययनमापनि शरीरमा भिटामिन डी र क्याल्सियमको कमी हूँदा महिनावारीमा हुने पीडा बढ्ने गरेको देखिएको थियो । अनुसन्धानकर्ताहरुले त्यो पीडा कम गर्नका लागि भिटामिन डी र क्याल्सियमको सप्लिमेन्ट खान सुझाव दिएका थिए ।
जब शरीरमा क्याल्सियमको कमी हुन्छ, शरीरको आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि दाँतमा भएको क्याल्सियम पनि प्रयोग हुन थाल्छ । यसले गर्दा दाँतको जरा कमजोर हुने, दाँत टुट्ने, गिजा दुख्ने र दाँत खिइने जस्ता समस्याहरु देखापर्न थाल्छ ।
बच्चाहरुमा क्याल्सियमको कमी हुँदा उनीहरुको दाँत पनि ढिलो गरी पलाउन सक्छ ।
क्याल्सियमको कमीको कारण मानिसको मुड बिग्रने तथा डिप्रेसन हुने सम्भावना बढेर जान्छ । तर यसबारेमा थप अनुसन्धान गरिनु जरुरी छ ।
त्यसैले कसैको मुड बिग्रिरहन्छ र डिप्रेसनको लक्षण छ भने शरीरमा क्याल्सियमको मात्रा कति छ भनेर जँचाउनु उचित हुन्छ ।
त्यसबाहेक, क्याल्सियमको कमीले मुर्छा पर्ने, मुटु फेल खाने, छातीमा पीडा हुने, निल्न गाह्रो हुने, आवाज परिवर्तन हुने, काम्ने, छाला सुख्खा हुने, छालामा घाउहरु आउने, मोतियाबिन्दू हुने जस्ता समस्याहरु पनि देखापर्न सक्छ ।
कति हुनुपर्छ क्याल्सियम?
एउटा वयस्क मानिसमा क्याल्सियमको मात्रा ८.८ देखि १०.४ मिलिग्राम प्रति डेसिलिटर (mg/dL) हुनुपर्छ । अझ बच्चाहरुलाई त क्याल्सियमको आवश्यकता बढी हुने भएकोले त्यो झनै बढी हुनुपर्छ । ८.८ भन्दा कम क्याल्सियम देखियो भने त्यसलाई क्याल्सियमको कमी मानिन्छ । शरीरमा कति क्याल्सियम छ भनेर रगतको जाँचबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।
सामान्यतः हामीले खानेकुराहरुबाटै पर्याप्त मात्रामा क्याल्सियम पाउन सक्छौं । ती खानेकुराहरु नियमित खाने हो भने यो समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
सामान्यतः निम्न खानेकुराहरुमा पर्याप्त मात्रामा क्याल्सियम पाउन सकिन्छ ः
डेरी प्रोडक्टहरुः जस्तै, दूध, चीज र दही,
सीमीहरु, अन्जीर, ब्रोकाउली, तोफु, भटमासको दूध, पालुंगो, आल्मोन्ड, तील आदि ।
१९ वर्षदेखि ५० वर्षसम्म उमेरका मानिसहरुलाई दैनिक १००० मिलिग्राम क्याल्सियमको आवश्यकता पर्दछ । अझ बच्चाहरु, युवाहरु र बुढापाकालाई त त्योभन्दा बढी नै चाहिन्छ ।
सकेसम्म प्राकृतिक रुपमा पाइने यस्ता खानेकुराहरुबाटै शरीरमा क्याल्सियमको आपूर्ति गर्नु राम्रो हुन्छ । डाक्टरको सल्लाहले छोटो अवधिका लागि क्याल्सियमको चक्कीहरु खान सकिन्छ । तर धेरैमात्रामा र लामो समयसम्म त्यस्ता चक्कीहरु खाँदा मुटुको समस्या देखापर्ने तथा मृगौलामा पत्थरी हुने खतरा बढ्छ ।
मानिसको शरीरमा धेरै कारणले क्याल्सियमको कमी हुन सक्छ । तर त्यसलाई आफ्नो खानेकुराहरुको माध्यमबाट सजिलै पन्छाउन सकिन्छ ।